Iyo iPhone 6s inoshandisa maviri akasiyana A9 processor | IPhone nhau
Iyo iPhone 6s inoshandisa maviri akasiyana A9 maprosesa zvichienderana nemugadziri
Apple ine vaviri vanopa A9 processor Uye, nenzira imwechete iyo inoitika nemasikirini, mune mamwe ane ruvara rwebhuruu uye mamwe akada kuita yero zvinoenderana nemugadziri, pane zvakare mutsauko pakati pevagadziri inogadzirwa neSamsung uye TSMC, asi mune iyi kesi iri saizi mutsauko. Chipworks anga ari iye akasimbisa misiyano iyi. Sezvauri kuona mumufananidzo wapfuura, pane misiyano pakati peAPPL0898 (Samsung) uye APL1022 (TSMC). Uku kukura kunoratidza kuti Samsung iri nani kugadzira maprosesa kupfuura TSMC, saka mugadziri weChinese achafanirwa kuisa mabhatiri kana asingade Apple kuti ipe keke rese kuna Samsung mune ramangwana (chimwe chinhu chakatokosheswa).
Musiyano wehukuru pakati peA9 processor inogadzirwa neSamsung uye modhi yakagadzirwa neTSMC iri pasi pe10%, saka hatitarisirwa kuona chero mutsauko. Iyo dzidziso inoti iyo a diki processor ichave zvakare inoshanda, saka ichange iine simba shoma rekushandisa, asi, dai zvanga zvakadaro, misiyano yacho midiki zvekuti hatina kukwanisa kuakoshesa.
Mune mawonero angu, Apple inofanira kutora ichinyura uye iine mutengesi mumwe chete pachinhu chimwe. Panyaya yemasikirini, kune vashandisi vakanyunyuta muApple Chitoro nekuti vaifarira ruvara rweimwe shamwari ye iPhone skrini kupfuura yaaive nayo uye izvi zvinogadziriswa kana zvese zvikwangwani zvakafanana. Panyaya yemaprosesa, uye kunyangwe misiyano iri mishoma, handifunge kuti chero munhu angade kuve neiprosesa iyo Chipworks inoti yakaderera kune imwe yakabhadhara yakaenzana mari. Ini ndinotenda kuti iro zuva iro mutengesi mumwechete paanogadzira ese ma processor e iPhone ari kuswedera pedyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 6s » Iyo iPhone 6s inoshandisa maviri akasiyana A9 maprosesa zvichienderana nemugadziri
Uye ini ndinowana sei samsung iphone 6s Plus?
pane chero hunyengeri hwekuvaziva kana ...?
Mhoroi Mori. Handina chokwadi nazvo. Vaya vakazviona vanoti vacharamba vachiongorora. Ini ndinofunga kuti, zvakanyanya, vanogona kugadzira imwe mhando yemuyedzo iyo yatinoona, asi kamwe chete mumaoko edu. Ndiri kureva, hazvingagone kutaurira kana iyo A9 yakagadzirwa neSamsung kana TSMC nekutarisa pabhokisi kana chero chinhu chakadai.
Ndatenda kwazvo Pablo, ndinofunga ndichagara ndichifara mukusaziva :)
asi imwe iri nani pane imwe mukuita? kana zvakafanana kumagumo?
Mhoro Sebastian. Kuita kwaisazokanganiswa. Chero zvazvingaitika, kugona (iyo Samsung yaizodya zvishoma), asi misiyano yacho midiki zvekuti hatizozviona.
Chero zvazvingaitika, sekutaura kwandakaita kuna Mori, avo vakazviona vacharamba vachiongorora.
Nekuremekedza kwese kwakakodzera, iwe watotaura kare kuti mumwe achadya zvishoma, kunyangwe mushandisi wepakati angati vachazviona kana paine misiyano, hazvingakwanise izvozvi kuti "ios inoshanda" uye ndizvozvo.
Verenga zvakare. Kopa uye unama: "Dzidziso yacho inoti processor diki ichave zvakare inoshanda."
Dzidziso, kwete ini.
"Asi dai zvanga zvakadaro, misiyano yacho midiki zvekuti hatikwanise kuzvikoshesa." Hapana chirevo.
Izvo hazvisi pasina, asi kana ichi chiri chokwadi zvinoita kwandiri kushaiwa kwakanyanya kuremekedza uye kushungurudzwa pachikamu cheApple. Zvakawanda sekutaurwa kwazvo kuti misiyano ishoma ... nezvimwe. Izvi hazvina kunaka, zviregerere iwe chero zvaunoda. Ivo vane mhino yekubhadharisa iwe chinhu chimwe uye vokuudza kuti ivo vakafanana uye kuti ivo vanopa kuita kumwe chete iko kana muchokwadi vari kukunyepera. Kunyangwe vataura zvakadii kuti misiyano haina kukosha, kana mapurosesa ari ehukuru hwakasiyana hazvigoneke kuti mhedzisiro yavo ive yakafanana kunyangwe isu tisingazvione. Kuti isu hatigone kukoshesa misiyano hazvireve kuti ivo vari kutinyengera, isu tinotenda kuti isu tinotenga zvakafanana neumwe munhu uye muchokwadi hazvisi. Kana zvikaonekwa kuti ndine chokwadi chekuti zvinotaurika. Ini pachangu handifarire kuseka kumeso kwangu. Zvinoita sekunge ini nemuvakidzani wangu takatenga mota chaiyo ndichibva ndaona kuti vane mainjini akasiyana ... Chii chakanaka? Ini handina kutarisira izvi kubva kuvanhu ava, ini ndinofunga iwe unofanirwa kuve wakaderera kwazvo kuti uite chakadai. Izvo zvakafanana nekutenga kopi yekunyepedzera yechigadzirwa uye pamusoro peizvozvo vane hushingi hwekuti varege kuenda vakananga votaura pachena. Ini ndinofunga ichi chakakomba zvakanyanya kunyangwe hazvo iwe uchida kuchidzikisira pasi.
Zvizere unobvumirana. Ini ndichiri kutadza kuva nechokwadi, asi ndinofunga TSMC ndeye 16nm uye Samsung ndeye 14. Panogona kunge paine mutsauko, kutaura nekukurumidza, Samsung ingadai yakamanikidza processor zvakanyanya uye zvirinani kupfuura TSMC. Zvishoma sezvazviri, iwe uchadya zvishoma.
Ini handifunge kuti zvinoridzirwa muridzo nekuti vanogona kuti mutengo ndewe weTSMC uye kuti avo vane Samsung, zvakanaka zvavanowana.
Iko kune webhusaiti yekutarisa kuti ndiani processor. Ndinozviposta mangwana.
Ndinokutendai, mangwana ndichave ndakanyatsoverenga. Dambudziko nderekuti sekuwanda kwatinogona kutsvaga kusvikira tava nacho kunze kwebhokisi uye tigoita bvunzo inoenderana, hatizokwanise kuziva zvatakatenga. Ndine chokwadi chegumi muzana kuti iko kuita, kunyanya kushanda kweye 100nm processor hapana mubvunzo kuti iri pamusoro pane iyo ye14nm imwe. Uye chii chinonyanya kundinetsa zvakanyanya kuti chiri muchirongwa cherotari, vamwe hongu uye vamwe kwete. Ehezve, uye kana iwe ukawana iyo 16nm, iwe unoitei? Nekuti ikozvino zvatinoziva kuti ndiani anoda kutsvaga chimwe chinhu chiri dzidziso yakaderera. Kwete ini zveshuwa, asi sezvazvinowanzoitika nemhando mbiri dze RAM yaive ne iPhone 16, vakachenesa maoko avo uye muApple Chitoro havana chavanoziva nezve izvo zvinhu. Ini pachangu, ndikatenga iyo iPhone nyowani ndichaiyedza uye ndikawana mumwe wevaya vane mubairo, ndichaenda kuchitoro chako ndonotora.
Joan Cortada akadaro
Ini ndangosimbisa uye yangu ine iyo Samsung zvinoenderana nemuyedzo. Yakatengwa muMontpellier musi wa25…. Asi bhokisi rinoti Made muChina, saka hazvifungidzike ndinofungidzira.
Pindura kuna Joan Cortada
Mhoro Joan. Ivo vese vakaungana muChina. Izvo zvinhu, senge processor mune ino kesi, iyo inogona kugadzirwa kumwe kunhu. Zvichitaurwa zviri nyore, China ndipo pavanoisa pamwechete zvidimbu zvese zvavanotumirwa kwavari.
3D Kubata ine sarudzo yekumedza screen zoom
Chenjerera iOS 9 Tsigiro yeWi-Fi. Inogona kuuraya yako data data